अन्तरालको सिद्धान्त २ – Word of Truth, Nepal
अन्तरालको सिद्धान्त २
१) जब परमेश्वरले ब्रह्माण्डको (पहिलो र दोस्रो स्वर्गहरू वा आकाशहरू) सृष्टिको उल्लेख गर्नुहुन्छ, उहाँले सृष्टिको ६ दिनहरूको समयावधि बताउनुहुन्छ (प्रस्थान २०:११; उत्पत्ति १)।
२) जब परमेश्वरले सबै कुराहरूको (ब्रह्माण्ड र तेस्रो स्वर्ग र स्वर्गदुतहरू पनि) सृष्टिको उल्लेख गर्नुहुन्छ, उहाँले समयावधि बताउनुहुँदैन (नहेम्याह ९:६ र कलस्सी १:१६)।
३) स्वर्गदुतहरू उत्पत्ति १:१ भन्दा अगाडि नै सृष्टि गरिएको हुनुपर्छ किनभने जब पृथ्वीको सृष्टि हुँदैथियो, परमेश्वरको प्रशंसा गर्न र ब्रह्माण्डको सृष्टिको गवाही हुन उनीहरू त्यहीँ थिए (अय्यूब ३८:४,७ हेर्नुहोस्)।
“मैले पथ्वीका जगहरू बसाल्दा तिमी कहाँ थियौ?…
जुन बेला बिहानका ताराहरूले (नेतृत्व गर्ने स्वर्गदुतहरू) एकसाथ गाए, र परमेश्वरका सबै छोराहरूले (स्वर्गदुतहरू, अय्यूब १:६; २:१ हेर्नुहोस्) हर्षले चिच्च्याए?”
परमेश्वरले पृथ्वीको जग बसाल्नुहुँदा अय्यूब त्यहाँ थिएनन् तर स्वर्गदूतहरू उपस्थित थिए! उत्पत्ति १:१ मा परमेश्वरले पृथ्वीको सृष्टि गर्नुहुँदा, स्वर्गदूतहरू त्यस घटनाको गवाही भइरहेका थिए। पहिलो दिनको एकदम सुरुमा, स्वर्गदुतहरूले सृष्टिकर्ताले के गर्दैहुनुहुन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसैले उत्पत्ति १:१ ले लुसिफर तथा स्वर्गदूतहरूको सृष्टिलाई समेट्दैन। उनीहरू सृष्टि भइसकेका थिए!
४) पृथ्वीलाई नष्ट-भ्रष्ट पारेको शैतानको पापले होइन, तर मानिसको पापले हो। पृथ्वी श्रापित भएको लुसिफरको पतनले होइन, तर आदमको पतनले हो (उत्पत्ति ३:१५-१९)। निम्न समयरेखालाई विचार गर्नुहोस्:
तपाईंले पाप, शैतान, मुक्ति र मुक्तिदाताको बारेमा राम्रो सँग बुझ्न सक्नुभएको होस् भनेर हामी तपाईंलाई एउटा सत्य कथा बताउन गइरहेका छौं। यो अहिलेसम्म भनिएका कथाहरू मध्ये सर्वश्रेष्ठ कथा हो! जिउँदो परमेश्वरले मानिसहरू र स्वर्गदुतहरूले उहाँ को हुनुहुन्छ र उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनी जानेको चाहनुहुन्छ। अब हामी परमेश्वरको छुटकाराको महान् दृश्यकाव्य हेर्नेछौं।
यस दृश्यकाव्यका मूख्य पात्रहरू:
क. जिउँदो परमेश्वर, सबै कुराहरूका सृष्टिकर्ता
ख. लुसिफर (शैतान)
घ. तपाईं र म जस्ता पापी मानिसहरू।
सुरुमा, उत्पत्ति १:१ मा ब्रह्माण्डको सुरु भन्दा पनि निकै अगाडि, परमेश्वरले तेस्रो स्वर्ग (“सर्वोच्च आकाश”—नहेम्याह ९:६) र कुनै मानिसले गन्न सक्ने भन्दा पनि ज्यादा यसमा भएका सबै स्वर्गदूतहरू सृष्टि गर्नुभयो (प्रकाश ५:११)। सृष्टि गरिएका स्वर्गदुतहरू मध्ये एकजनाको नाम लुसिफर थियो, त्यो करुब जसले परमेश्वरको सिंहासनलाई ढाकेर राख्थ्यो (इजकिएल २८:१२-१६)। एकदिन आफ्नो सुन्दरताको कारणले यस स्वर्गदुतको हृदय घमण्डले उचालियो (इजकिएल २८:१७) र एउटा प्राणी मात्र भए तापनि उसले आफ्नो बारेमा अति धेरै कुराहरू सोच्यो, र अनुपम सृष्टिकर्ता परमेश्वरको बारेमा बेठीक तरिकाले बिचर गर्न थाल्यो। परमेश्वरको मात्र स्वामित्व रहेको कुराहरू उसले चाह गर्न थाल्यो। घमण्डमा फुलिएर (१ तिमोथी ३:६), उसले आफैंलाई परमेश्वरको स्थानमा राखेर पाप गर्यो (यशैया १४:१३-१४का “म … चढ्नेछु, उचाल्नेछु” इत्यादि शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस्)। पहिलो पटक, सृष्टिको थोकले सृष्टिकर्ताको बिरुद्धमा पाप गरेको थियो। यो बाहिरी पाप थिएन, यो भित्री पाप थियो (“किनकि तैंले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्”- यशैया १४:१३), तर आफ्नो सृष्टिका थोकहरूको हृदयमा देख्नुहुने परमेश्वरले तुरुन्तै पापको इन्साफ गर्नैपर्छ। धर्मी परमेश्वरले सिद्ध इन्साफको अभ्यास गर्दै उसलाई आगोको झीलभित्र फ्याँक्ने निर्णय गर्नुभएको छ (मत्ती २५:४१)। अरू स्वर्गदुतहरू छक्क परे। यस्तो कुरा उनीहरूले कहिल्यै देखेका थिएनन्। त्योभन्दा अगाडी परमेश्वरले कहिल्यै पनि कसैको इन्साफ गर्नुभएको थिएन। उहाँले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था नै सृजना भएको थिएन। परमेश्वरको सिद्ध इन्साफ पहिलो चोटि देखिएको थियो।
पापमा उसको पतनपछि, बाइबलले हामीलाई बताएको छ कि लुसिफर शैतान बन्यो। “शैतान” शब्दको अर्थ “दोष लगाउने” हो। शैतानले अरू स्वर्गदुतहरूको सामुन्ने परमेश्वरलाई दोष लगायो भन्नु तर्क सङ्गत हो। सृष्टकर्ताको बिरोधमा शैतानले लगाएको दोषको तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ: “प्रेम गर्ने परमेश्वरले कसरी उहाँको सृष्टिलाई नरकमा फ्याँक्न सक्नुहुन्छ? त्यो त जायज कुरा भएन!!” (मुक्ति नपाएका शैतानका सन्तानहरूले-यूहन्ना ८:४४, आज प्राय: त्यहि दोष लगाउँछन्)। परमेश्वर प्रेम नगर्ने र पक्षपाती हुनुहुन्छ भन्दै शैतानले एक तिहाई स्वर्गदुतहरूलाई फुस्लायो
(प्रकाश १२:४) र परमेश्वरको स्वभावमा शंका गर्दै, उनीहरू पनि यो भयानक पापमा फसे। यी पतीत दुतहरूलाई पनि दुष्ट आत्माहरू वा शैतानका दुतहरू भनिन्छ।
परमेश्वरले शैतान र उसका दुतहरूको निम्ति नरकको झील तयार पार्नुभए तापनि तिनीहरूलाई उहाँले तुरुन्तै त्यहाँ फ्याँक्नुभएन। सबै स्वर्गदुतहरूलाई उहाँ पहिले केही सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। आफ्नो स्वभाव प्रस्तुत गर्न र उहाँ धर्मी परमेश्वर साथै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी उहाँले एकैचोटि तर सदाका निम्ति प्रमाणित गर्न चाहनुभयो। स्वर्गीय सेनाहरूलाई परमेश्वरले यसो भन्नुभएको जस्तै हो, “म कति पवित्र र कति धर्मी छु भनी तिमीहरूलाई देखाउनेछु (म पापलाई कति घृणा गर्छु र कसरी मैले पापलाई इन्साफ गर्नैपर्छ) तरैपनि म कति प्रेमिलो र म कति अनुग्रही छु भन्ने पनि तिमीहरूलाई देखाउनेछु।” परमेश्वरले अब के गर्नुहुनेछ भन्ने बारेमा स्वर्गदुतहरू औधि उत्सुक थिए!
जब सबै स्वर्गदुतहरूले उत्साहित भएर हेरिरहेका थिए, परमेश्वरले सृष्टिको महान् कार्य सुरू गर्नुभयो। उहाँका मुखका शब्दहरूले (भजनसङ्ग्रह ३३:६५-९) आकाशहरू र पृथ्वी सृष्टि गरिए (उत्पत्ती १;१)। परमेश्वरले पृथ्वीको जग हाल्नुहुँदा पवित्र दुतहरूले रमाहट गरे (अय्यूब ३८:४,७)। पृथ्वी (जोचाहिँ सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूभन्दा अगाडि सृष्टि गरिएको थियो) उहाँको दृश्यकाव्यको निम्ति रङ्गमञ्च बन्यो। उत्पत्ती १ अध्यायमा पथ्वी केन्द्र बिषय बन्दछ (उत्पत्ती १:२-“अनि पृथ्वी…”)। अरबौं खरबौं ताराहरू त पछि बिचार गरिएका थोकहरू झैं गरी उल्लेख गरिएको छ (उत्पत्ती १:१६)। परमेश्वरले आफ्नो सिद्ध गुणहरूको प्रस्तुतिकरणको निम्ति उहाँले गर्न लाग्नुभएको कार्यको मूख्य केन्द्र पृथ्वी ग्रह बन्दछ। अन्त्यमा, मुक्तिदाता स्वर्गको महिमाबाट बाहिर आउनुभए पछि र मानवको रूपमा आफैंलाई नम्र तुल्याउनु भएपछि (फिलिप्पी २:६-८), शृङ्खला अन्तिम चरणमा आइपुग्छ। पछि कलवरीको क्रूसमा जानुभएर उहाँले आफैंलाई अझै नम्र तुल्याउनुहुन्छ। यहीँ नै परमेश्वरले पापलाई कति घृणा गर्नुहुन्छ भनी देखाउनुभयो। यहीँ परमेश्वरले कसरी पापको इन्साफ गर्नुपर्छ भनी देखाउनुभयो। र अझैपनि यहीँ परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिप्रति, र झन् मानिसहरू प्रति उहाँ कति प्रेमिलो र अनुग्रही हुनुहुन्छ भनी देखाउनुभयो। त्यसैले क्रूसमा नै शैतानले हार खायो र परमेश्वरको गुण पुष्टि गरियो। शैतानको दोषहरू एकैचोटि र सदाका निम्ति झूटा प्रमाणित भए!
आज स्वर्गदुतहरूले मण्डलीलाई अवलोकन गरिरहेका छण् र परमेश्वरका नाना प्रकारका बुद्धि (एफेसी ३:१०) को र प्रशस्त अनुग्रह (एफेसी २:७) को बारेमा सिकिरहेका छन। हजार वर्षे राज्यको अन्त्यमा छुटकारा सम्बन्धि दृश्यकाव्यको पूर्ण अन्त्य हुनेछ अनि अन्त्यमा शैतान र उसका दुतहरूले आगोको झीलभित्र दण्ड भोग्नेछन् (प्रकाश २०:१०), र परमेश्वरले गर्नुभएको हरेक कुराहरूमा उहाँ एकदम धर्मी र न्यायसङ्गत हुनुहुन्छ भनी स्वर्गदुतहरूले पूर्ण रूपमा बुझ्नेछन्।
परमेश्वरलाई सदा-सदाको पनि महिमा भइरहोस्!!!
४.“लुसिफरको जलप्रलय” को समस्या
बाइबलले केवल एउटा विश्वनव्यापी प्रलय भएको बताउँछ, जुनचाहिँ दुष्ट मानिसहरूमाथि परेको थियो। त्यो कस्तो थियो र कहिले भएको थियो (लूका १७:२६-२७; हिब्रू ११:७; १ पत्रुस ३:२०; २ पत्रुस २:५; ३:५-६)? _______________________________________________। परमेश्वरले नूहको जलप्रलय धेरैपटक उल्लेख गर्नुभएको छ। यसको वर्णन गर्न उहाँले बाइबलमा ३ अध्यायहरू दिनुभएको छ—उत्पत्ति ६-८। माथि लिखित अन्य पदहरूमा पनि यसको वयान गरिएको छ। तर लुसिफरको जलप्रलय बारेमा परमेश्वरले हामीलाई केही पनि भन्नुभएको छैन! किनभने त्यस्तो जलप्रलय कहिल्यै भएकै थिएन! कहिल्यै पनि नघटेको घटनाको बारेमा बताउन परमेश्वरले जमर्को नै गर्नुभएको छैन!
के साँच्चै जीवशेषहरू उत्पत्ती १:१ र १:२ बिचको अन्तरालमा बनेका हुन् त? जीवशेष भनेको के हो? जीवशेष भनेको पशु वा वनस्पतिको हिस्सा हो जुनचाहिँ सारो माटो वा कोइला, इत्यादिमा संरक्षण भएको हुन्छ। वनस्पतिहरू _______ दिनसम्म सृष्टि गरिएको थिएन भनी उत्पत्ती १ ले सिकाउँछ। हामी यो पनि जान्दछौं कि ________ दिन सम्म पहिलो पशुहरू पनि अस्तित्वमा आइसकेका थिएनन्। तर अन्तरालमा विश्वास गर्नेहरूले उत्पत्ती १:२ भन्दा पनि धेरै अगाडि पृथ्वीमा त्यहाँ पशु र वनस्पति थियो भनी भन्दछन्। ______ दिनमा आदम बनाइँदा, डाइनसोर (Dinosaurs) का हड्डीहरू र आदमभन्दा अगाडीका मानिसहरूका हड्डीहरू समेत गरी भूमीमुनि हजारौं जीवशेषहरू थिए भनी उनीहरूले भन्दछन्! यी सबै प्राणीहरू लुसिफरको पापको कारणले पृथ्वीमा आएको इन्साफद्वारा नष्ट भएका हुन् भनी उनीहरू विश्वास गर्दछन्, र तसर्थ उनीहरूको अनुसार आदम सृष्टि गरिनुभन्दा धेरै अगाडी करौडौं पशुहरू र वनस्पतिहरू पहिलै मरिसकेका थिए! यो त आदम तिनको पाउमुनि असङ्ख्य पशुहरू गाडिएको चिहानमाथि, हिँडिरहेको जस्तो देखा पर्छ!
के यो साँच्चै सत्य हो? संसारमा मृत्यु पहिलो चोटि कहिले पस्यो? “यसकारण जसरी ____________ ____________ (आदम) संसारमा पाप पस्यो, र पापद्वारा ____________ आयो, अनि त्यसरी नै ____________ सबै मानिसहरूमा फैलियो” (रोमी ५:१२)। आदमको पापको फलस्वरूप संसारमा मृत्यु पस्यो! रोमी ८:१९-२२ पढ्नुहोस्। पापमा मानिसको पतनको कारणले सम्पुर्ण सृष्टि भयानक भ्रष्टता (रोग, ह्रास र मृत्यु) र श्रापको अधिनतामा छ। तर आदमको पतन र श्रापको परिणामभन्दा अगाडि, त्यहाँ मृत्यु हुन सक्दैनथियो। आदमको पाप र फलस्वरूप आएको श्रापको बारेमा बाइबलको कुन अध्यायले बताउँछ? ________________________ के यो समयभन्दा अगाडि संसारमा मृत्यु पस्न सक्थ्यो? ____________
६.“हुनगयो” शब्दको अर्थको समस्या
अन्तरालको सिद्धान्तका समर्थकहरूले उत्पत्ति १:२ लाई यसरी अनुवाद गर्न चाहन्छन्: “पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य हुनगयो।” तर त्यसो होइन। उत्पत्ती १:२ ले सृष्टिको प्रारम्भिक चरणमा पृथ्वी त्यही अवस्थामा थियो भनी बताउँछ, यो त्यस्तो हुनगएको होइन। परमेश्वरले सुरूमा पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा त्यो कस्तो थियो? यो आकारबिनाको र शून्य थियो! किन यो आकारबिनाको र शून्य थियो? किनभने परमेश्वरले त्यसरी नै सृष्टि गर्नुभएको थियो! तर परमेश्वरले पृथ्वीको सृष्टि गर्ने काम सिद्ध्याउनु भएको थिएन! यो त सृष्टिको केवल __________ दिन थियो! उत्पत्ती १:२ले सृष्टिको पहिलो चरणमा भएको पृथ्वीको बारेमा वर्णन गर्दछ, तर यो त कहिल्यै पनि श्रापित नभएको पृथ्वी थियो। यो श्रापित भएको थिएन, तर यो त काम नसिद्धिएको पृथ्वी थियो। यो अध्ययनमाला अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि “आकारबिनाको र शून्य” शब्दावलीको अर्थ हामी हेर्नेछौं।
७.“अन्धकार” को समस्या
परमेश्वरले भन्नुभयो, “अनि पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य थियो; अनि गहिरा सागरको सतहमाथि ____________ थियो”(उत्पत्ती १:२)। अन्धकार के हो? के यो कुनै खराब कुरा हो? के यो कुनै दुष्ट कुरा हो? जब तपाईंले सानो बालकलाई ओच्छ्यानमा राख्नुहुन्छ निश्चय पनि तपाईंले उसलाई, बत्ती निभेपछि दुष्ट अन्धकार आउनेछ भनी भन्नुहुँदैन! अन्धकार नैतिक रूपमा नै खराब होइन। अन्धकार भनेको त केवल प्रकाश नहुनु हो! यदि त्यहाँ कुनै ज्योति छैन भने, त्यहाँ अन्धकार हुनेछ! सूर्य ग्रहणको समयमा सूर्यलाई चन्द्रमाले ढाक्दा अँध्यारो हुन्छ! तपाईंले बत्ती निभाउनुभयो भने अँध्यारो हुन्छ! परमेश्वरले सर्वप्रथम ज्योतिलाई कहिले सृष्टि गर्नुभयो? उत्पत्ति १ अध्यायको पद ____। के यसले पद २ मा अन्धकार हुनुको कारणलाई प्रस्ट्याउँछ? _______________।
साथै यशैया ४५:७ मा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले भन्नुभयो, “____________ रच्ने र _____________ सृष्टि गर्ने म हुँ” भजनसंग्रह १०४:२०मा पनि: “तपाईंले ______________ पार्नुहुन्छ, र __________ पर्छ” र २४ पदबाट हामीले बुझ्दछौं कि सम्पन्न गरिएका सबै कुराहरू परमेश्वरका का_______ हुन्! उत्पत्ति १:२ मा “अन्धकार” को अर्थ इन्साफ भन्ने होइन! यसको अर्थ त शाब्दिक अर्थ नै हो, अर्थात् “अन्धकार”। भजनसङ्ग्रह १३९:११-१२ पनि पढ्नुहोस्।
उत्पत्ति एक अध्यायमा पढ्दा, उक्त अध्यायले सृष्टिको कुरा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ कि पुनर्सृष्टिको? के परमेश्वरले सम्पूर्ण थोकहरू पुन: सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कि परमेश्वरले सम्पूर्ण थोकहरू पहिलो पल्ट सृष्टि गर्दैहुनुहुन्थ्यो? उत्पत्ति २:३ ले बताउँदछ कि “उहाँ (परमेश्वर) ले आफ्नो सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो, जो परमेश्वरले __________ गरेर ______________ थियो।” यो पदले यस्तो बताउँदैन, “उहाँले आफ्नो सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो, जो उहाँले पुनर्सृष्टि गरेर पुन: बनाउनुभएको थियो।” फेरी पनि, प्रस्थान २०:११ ले यस्तो बताउँदैन “किनकि छ दिनमा परमेश्वरले आकाश, पृथ्वी … पुनर्सृष्टि गर्नुभयो”। कहिलेकसो हामीले भूल गर्दछौं र र कुनै कुराहरू पुन: दोहोर्याएर गरिनुपर्छ! तर परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टिकार्य सिद्ध थियो र यो केवल एकपटक मात्र गरिनुपरेको थियो! भजनसंग्रह १८:३० हेर्नुहोस्! परमेश्वरले भूल गर्नुहुँदैन।
९.“फेरि भरिँदै” नामक शब्दावलीको समस्या
उत्पत्ति १:२८ मा King James Bible को “replenish” शब्द प्रयोग गरिएको छ जुन शब्दको अर्थ “फेरि भरिँदै” जानु नभएर “भरिँदै” जानु हो। सन् १६११ मा King James Bible प्रकाशित हुँदा, “replenish” शब्दको अर्थ “भर्नु” हुन्थ्यो। त्यसैले परमेश्वरले आदम र हव्वालाई पृथ्वी भर्ने आज्ञा दिँदै हुनुहुन्थ्यो! पहिले कहिल्यै पनि यो मानिसहरूले भरिएको थिएन, र परमेश्वरको इच्छाचाहिँ पृथ्वी मानिसहरूले भरिऊन् भन्ने थियो। पृथ्वी जीवनले भरिएको परमेश्वरले चाहनुभयो, र यस अन्तर्गत वनस्पतिहरू, पशुहरू र मानिसहरू पर्दथे!
१०.पदहरूको बीचमा पढ्ने समस्या
कृपया दुईओटा पदहरूको बीचमा अन्तराल वा अन्य कुनै कुराहरूको खोजी नगर्नुहोस्। बाइबल पढ्ने क्रममा परमेश्वरको इच्छा यो हो, हामीले बाइबलका पदहरूलाई पढ्नुपर्छ, पदका बीच-बीचमा होइन! हामीले वाक्यहरूलाई पढ्नुपर्छ, वाक्यहरूकाका बीच-बीचमा होइन! हिब्रू १३:५ र ६ को बीचमा जति “पढे” पनि तपाईंलाई कुनै आशिष मिल्न सक्दैन तर हिब्रू १३:५ र हिब्रू १३:६ लाई पढेर ती पदहरूलाई (उदेकका प्रतिज्ञाहरूलाई!) तपाईंले विश्वास गर्नुभयो भने आशिष पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईंले हृदयमा ठूलो उत्साह पानुहुनेछ!
हामीले उत्पत्ति १:१ पढेपछि १:२ लाई नै पढ्नुपर्छ। यी पदहरूको बीच मा नपढ्नुहोस्, किनभने त्यहाँ केही पनि छैन! पदहरूका बीचमा पढ्ने व्यक्तिले आफूले चाहे जस्तै बाइबलको व्याख्या बनाउन सक्छ। पदहरूलाई मात्र पढ्ने व्यक्तिले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई राम्ररी देख्न सक्छ। परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस्, अन्तरालहरूलाई होइन! त्यहाँ हुँदै नभएको गुप्त सन्देशको खोजी नगर्नुहोस्!
उत्पत्ति १:२ को खास अर्थ के हो?
“आकारबिनाको र शून्य”
उत्पत्ति १:१ सित उत्पत्ति १:२ को निकट सम्बन्ध छ। उत्पत्ति १:१ ले परमेश्वरले आकाशहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको बताउँछ। पद २ मा चाहिँ घटनाक्रमको बयानमा एउटा क्षणिक विराम (pause, break) लगाइएको छ जसलाई व्याकरणमा वियोजक खण्डवाक्य (disjunctive clause) भनिन्छ। उत्पत्ति १ अध्यायमा परमेश्वरले सृष्टि कार्यको घटनाक्रमलाई एक पछि अर्को के सृष्टि गरियो भनी बताउनुभएको छ। उहाँले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो (१ पद), त्यसपछि उहाँले ज्योति सृष्टि गर्नुभयो (३ पद), त्यसपछि उहाँले अन्तर बनाउनुभयो (७ पद), त्यसपछि उहाँले पानीलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्नुभयो (९ पद), त्यसपछि उहाँले वनस्पतिहरू बनाउनुभयो (११-१२ पद), त्यसपछि उहाँले सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरू बनाउनुभयो (१४-१६ पद), र यसरी पहिलो अध्यायको अन्त्य हुन्छ। तर जब तपाईं २ पदमा आइपुग्नुहुन्छ, सृष्टि कार्यको घटनाक्रमको बयानलाई अघि बढाउनु अघि, सृष्टिको प्रारम्भिक चरणमा पृथ्वीको अवस्था कस्तो थियो भनी बताउन परमेश्वरले एकछिनको लागि रोकिनु हुन्छ। परमेश्वरले यस्तो भन्नुभएको जस्तै हो, “एकैछिनको लागी रोकिऔं, र पहिलो दिनको मेरो अरू सृष्टिकार्यको वर्णन गर्नु अगाडी, पृथ्वीको सर्वप्रथम सृष्टि हुँदा यो कस्तो थियो भनी म तिमीहरूलाई बताउनेछु। मैले सुरुमा पृथ्वीको सृष्टि गर्दाहुँदी, यो आकारबिनाको र शून्य थियो।” त्यसैले उत्पत्ति १:२ ले सुरुमा परमेश्वरले पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा यो कस्तो थियो भनी हामीलाई बताउँछ! परमेश्वरले २ पदलाई हटाउन सक्नुहुन्थ्यो र १ पदबाट सोझै ३ पदमा जान सक्नुहुन्थ्यो, र त्यहाँ कुनै क्षणिक विराम हुनेथिएन:
“शुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, र परमेश्वरले भन्नुभयो: उज्यालो होओस्!” (उत्पत्ति १:१ लाई १:३ सँग तुलना गर्नुहोस्)
तर परमेश्वर एकछिन रोकिनुभएर हामीलाई पृथ्वी शुरुमा कस्तो थियो भनी व्याख्या गर्नुहुन्छ। उत्पत्ति १:२ले १ पदको नयाँ सृष्टि गरिएको पृथ्वीको वर्णन गर्दछ र यो कस्तो थियो भनी हामीलाई बताउँदछ—यो “आकारबिनाको र शून्य” थियो।
वियोजक खण्डवाक्य (Disjunctive clause) को अर्को उदाहरण उत्पत्ति २:११-१४ मा पाइन्छ। यी पदहरूमा चारओटा नदीहरूको नाम दिइएको छ: “पहिलोचाहिँको नाम… दोस्रोचाहिँको नाम… तेस्रो नदीको नाम” इत्यादी। ११ पदमा पहिलो नदीको नाम (“पीशोन”) दिइएको छ र हामी हवीला देशको बारेमा पनि बताइएको छ जहाँ सुन पाइन्छ। त्यसपछि १२ पदमा त्यहाँ क्षणिक विराम छ। दोस्रो नदीको नाम दिइनुको सट्टा (१३ पदसम्म पनि त्यो नाम उल्लेख गरिएको छैन), परमेश्वरले त्यस देशको सुन कस्तो थियो भनी बताउन रोकिनुहुन्छ (अनि त्यस देशको सुन _____________ हुन्छ”)।
अर्को उदाहरण योना ३:३ मा छ। त्यहाँ योना “निनवेमा गए” भनिएको छ। ४ पदमा त्यसपछि उनी “शहरभित्र पसे” भन्ने उल्लेख भए पनि पहिले पद ३ मै निनवे शहरको वयान गर्नलाई छोटो विराम (break) लिइएको पाइन्छ – “अनि निनवेचाहिँ यात्रा गर्दा तीन दिन लाग्ने एउटा अत्यन्तै ठूलो शहर थियो।” घटनाक्रम बताउँदै जानु अघि टक्क अडिएर निनवे कस्तो शहर थियो भनी बयान गरिएको छ। (कृपया ध्यान दिनुहोस्: यो पदलाई यसरी अनुवाद गर्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ: अनि निनवेचाहिँ अत्यन्तै ठूलो शहर बन्यो।” यो त योना त्यहाँ पुग्नुभन्दा निकै पहिले नै ठूलो शहर थियो!)
अरू उदाहरणहरू जकरिया ३:१-३ र १ शमूएल ४:१४-१५मा पाइन्छ। यी सबै उदाहरणहरूलाई एकपटक तुलना गरौं:
उत्पत्ति १:२ ले भनेको सृष्टिको पहिलो दिनको नव पृथ्वीको सिद्ध वर्णन हो! त्यस समय पृथ्वी कस्तो थियो? यो आकारबिनाको र शून्य थियो! यदि मौलिक रूपमा पृथ्वी आकारबिनाको र शून्य थियो भने, यसको अर्थ के हो? किन परमेश्वरले पृथ्वीलाई यस प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो? यी शब्दहरूको माने के हो? “आकारबिनाको” भन्नुको अर्थ रचनारहित हुन्छ। पृथ्वी रूपरहित थियो। पृथ्वीलाई आवादी गर्नलाई त्यसलाई आकार र रूप दिन बाँकि नै थियो। “शून्य” भन्नाले पृथ्वी प्राणीरहित, रित्तो अवस्थामा थियो भन्ने बुझिन्छ। यस अवस्थामा पृथ्वी एकदम रित्तो थियो (वनस्पतिहरू थिएनन्, पशुहरू थिएनन्, मानिसहरू थिएनन्, इत्यादी)। प्रारम्भिक पृथ्वी बिग्रेको, श्रापित अवस्थामा थिएन बरू रचनारहित र रित्तो अवस्थामा थियो! सृष्टिको काम बाँकि नै थियो। आफ्नो सृष्टिको कार्य सम्पन्न गर्न परमेश्वरले दुइटा काम गर्नु आवश्यक थियो—उहाँले पृथ्वीलाई रच्नुपर्थ्यो र त्यसलाई भर्नुपर्थ्यो! “रचनारहित र रित्तो” शब्दावलीको अर्थ पृथ्वी असिद्ध थियो भन्ने चाहिँ होइन। उत्पत्ति १:२ मा पनि पृथ्वी यो अर्थमा सिद्ध थियो, त्यस समयमा यो जस्तो हुनुपर्ने परमेश्वरको उद्देश्य थियो, ठीक त्यस्तै नै थियो! परमेश्वरले हरेक कुराहरू सिद्ध रूपमा गर्नुहुन्छ! उहाँले गल्तीहरू गर्नुहुँदैन! पृथ्वीको सृष्टि सिद्ध रूपमा भएको थियो, तर उक्त कार्य सकिएको भने थिएन। उक्त कार्य पूर्ण भएको थिएन। के उत्पत्ति २:७ मा आदम सिद्ध रूपमा सृष्टि गरिएका थिए? _____________ तर परमेश्वरले हव्वाको सृष्टि गर्नु अगाडि, के मानिसको सृष्टि पूर्ण भएको थियो (उत्पत्ति २:१८ हेर्नुहोस्)? __________ आदम सिद्ध रूपमा सृष्टि गरिएको भए तापनि, परमेश्वरले उसकहाँ स्त्रीलाई लिएर नआउन्जेल ऊ वास्तवमै पूर्ण भएको थिएन! र जब परमेश्वरले आदमलाई एक्लो देख्नुभयो (उसको हव्वारहित अवस्थामा) उहाँले भन्नुभयो “असल होइन” (उत्पत्ति २:१८)। त्यस्तैगरी, उत्पत्ति १:२ मा जब परमेश्वरले रचनारहित र अपूर्ण पृथ्वी देख्नुभयो, उहाँले यसो भन्नुभएको हुनुपर्छ, “असल होइन!” पहिलो दिनमा नै परमेश्वरले उहाँको सृष्टि कार्य रोक्नु भएको भए भद्रगोल हुनेथियो होला! तर तपाईं सृष्टिको हप्ताको अन्तिममा आइपुग्नुहुँदा, परमेश्वरले आफूले रूप दिनुभएर अनि भर्नुभएर पूर्ण भएको भएको पृथ्वीलाई हेर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ “अ____ अ_________ थियो” (उत्पत्ति १:३१)।
यशैया ४५:१८ले बताउँछ कि परमेश्वरले “पृथ्वी रच्नुभयो”। उत्पत्ति २:७ ले बताउँछ कि परमेश्वरले “मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो”। कुमालेको बारेमा बिचार गर्नुहोस्। उसले रचनारहित र अपूरो माटोको ढिक्काबाट कार्य सुरु गर्दछ! यो खासै राम्रो देखिँदैन! तर त्यस अपूरो माटोको ढिक्कामा कुनै दुष्ट कुरा हुँदैन! तपाईंले केवल कुमालेलाई उसको काम सम्पन्न गर्न दिनुहोस्! उसले यसको रचना गर्दछ र आकार दिन्छ र ठीक तरिकाले तयार गर्छ!
परमेश्वर एक कुशल रचनाकार हुनुहुन्छ! उहाँले पृथ्वीलाई रच्नुभयो र जीवनको निम्ति सिद्ध रूपमा तयार पार्नुभयो। उहाँले हाम्रो पृथ्वीलाई एक कुशल कारिगरीको जस्तो पूर्णता दिनुभएको छ! यदि तपाईंलाई कुनै समय शंका लाग्छ भने, उहाँले बनाउनुभएको संसारलाई हेर्नुहोस्! परमेश्वरको रचना र उहाँको विशिष्ट कला जतासुकै देखिन्छ।
के उत्पत्ति १:२ मा पृथ्वी वास्तवमै रित्तो थियो? के यो वनस्पतिहरूले भरिएको थियो? _________ के यो ज्योतिका किरणहरूले भरिएको थियो? ______ के यो बोटविरूवा र रूखहरूले भरिएको थियो? ________ के यो चराहरू र माछाहरू र जमिनमा चलहल गर्ने जनावहरूले भरिएको थियो? _________ के आकाशहरू ग्रहहरू र ताराहरूले भरिएका थिए? _________ के पृथ्वी मानिसहरूले भरिएको थियो? _________ पृथ्वी एकदम रित्तो थियो! तर जब तपाईं उत्पत्ति १ अध्याय पढ्नुहुन्छ परमप्रभुले पृथ्वीलाई जीवनले भर्नुभएर उदेकको काम गर्नुभएको देख्नुहुनेछ! भजनसङ्ग्रह २४:१ हेर्नुहोस्।
पृथ्वीलाई मानिसहरूको निम्ति तयार बनाउनु परमेश्वरको उद्देश्य थियो! यशैया ४५:१८ पढ्नुहोस्। परमेश्वरले कुन उद्देश्यले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो? “त्यो ब________ ग_________ भ_______ र_____________”। परमेश्वरले पृथ्वीलाई मानिसहरूद्वारा भर्न चाहनुहुन्थ्यो (उत्पत्ति १:२८)। परमेश्वरले पृथ्वीलाई जीवित थोकहरूले भर्न चाहनुहुन्थ्यो! यदि परमेश्वरले रित्तो र मानवरहित पृथ्वी सृष्टि गर्न चाहनुभएको भए, उहाँ उत्पत्ति १:१ मै रोकिनुहुनेथियो। तर परमेश्वरले पृथ्वीको रचना गर्नुभयो र यसलाई बनाउनुभयो र यसलाई स्थापित गर्नुभयो र त्यो बसोबासो गरियोस् भनेर बनाउनुभयो! परमेश्वरले पृथ्वीलाई मानिसहरूको निम्ति तयार गर्न सृष्टिकार्यमा ६ दिनहरू बिताउनुभयो! अब छुटकाराको दृश्यकाव्य सुरु गरिनको निम्ति तयार छ!!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 21:07:072020-04-28 14:31:42अन्तरालको सिद्धान्त २
अन्तरालको सिद्धान्तआकाश, पृथ्वी र मानिसको उमेर क...